Google ပင်မ စပိန်တွင်ရှိပြီးဖြစ်သည်။ ဂူဂဲလ်၏စပီကာသည်ဂူဂဲလ်လက်ထောက်ကိုစမတ်ဖုန်းများထက် ကျော်လွန်၍ သုံးစွဲသူများအားလုံးအတွက်ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေမည်ဟုကတိပေးခဲ့သည်။ ဦး ဆောင်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်မှဤကိရိယာအသစ်သည်သင်၏ဒေတာဘေ့စ်ကိုချက်ချင်းရှာဖွေရန်နှင့်မီးဖွင့်ခြင်း၊ သီချင်းဖွင့်ခြင်းသို့မဟုတ်အသွားအလာအခြေအနေကိုစစ်ဆေးခြင်းကဲ့သို့သောအမိန့်များကိုချက်ချင်းလုပ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း၊ ဤစစ်ဆင်ရေးအားလုံးကိုခံစားရန်ကိရိယာသည် Wi-Fi ကွန်ယက်သို့ချိတ်ဆက်ရန်ခွင့်ပြုသည့်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုရှိရန်လိုအပ်သည်။ ယနေ့အသုံးအများဆုံးမှာအိမ်နီးချင်းကလေးတိုင်းနီးပါး၌သူတို့၏တပ်ဆင်ထားသောပစ္စည်းကိရိယာများကိုချိတ်ဆက်ရန်အိမ်တွင်အင်တာနက်နှုန်းရှိကြသည်။ ကွန်ပျူတာ၊ စမတ်တီဗွီ၊ စမတ်အပူထိန်းကိရိယာ ... သို့သော်၊ အင်တာနက်ကြေး ဘာအတွက်ငှားလို့ရမလဲ သင်၏ Google Home ကိုသုံးပါ?
1 အဆိုပါ convergence အထုပ်, ရွေးချယ်စရာ၏မိဖုရား
2 အခြားနည်းလမ်းကို 4G wifi ကွန်ယက်တွင်ရှာပါ
အဆိုပါ convergence အထုပ်, ရွေးချယ်စရာ၏မိဖုရား
ယခုနှစ်အနည်းငယ်အထိ converget packets တွေကို သူတို့ကစပိန်အတွက်ပိုနှစ်သက်တယ်။ ၎င်းတို့သည်ဆက်သွယ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးအားတူညီသောငွေပမာဏနှင့်စျေးနှုန်းတစ်ခုတည်းဖြင့်ပျော်မွေ့ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းတို့သည်သီးခြားစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းထက်များစွာသက်သာသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်အပြိုင်အဆိုင်အများဆုံးသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
သံသယတစ်ခုမှမရှိဘဲ, မိုဘိုင်း + အင်တာနက်နှုန်းထားများ (landline ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ) Google Home ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်စိုးရိမ်စရာမလိုဘဲအသုံးပြုရန်အတွက်လက်တွေ့ကျပြီးအားကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဤသဘောမျိုးဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည် -
La အင်တာနက်အမြန်နှုန်း။ အမှန်မှာ Google Home ၏လုပ်ဆောင်မှုသည်သင်၏အိမ်၏ Wi-Fi ကွန်ယက်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုအနည်းငယ်သာရှိခြင်းကြောင့်၎င်းသည်သင့်အားပုံမှန်သာယာမှုနှင့်အတူဆက်လက်အလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ သို့သော်မှတ်သားရန်အရေးကြီးသည် ဂူဂဲလ်စပီကာတစ်လျှောက်လုံးလည်ပတ်နေမည့်သူအားလုံးဝန်ဆောင်မှုများ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ မှအကြောင်းအရာများကိုကြည့်ရှုရန် Netflix နှင့်အတူဗီဒီယို streaming (လက်ရှိ Google Home နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောတစ်ခုတည်းသောပလက်ဖောင်း) ၎င်းသည်နှေးကွေးသောဝန်ကိုရှောင်ရှားရန်အတွက်လုံလောက်သောအမြန်နှုန်းရှိရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
El ဝိုင်ဖိုင်ကွန်ယက်အမျိုးအစား မင်းမှာဘာရှိလဲ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ Wi-Fi ဆက်သွယ်မှုဖြင့်သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည် 2.5G သို့မဟုတ် 5G ကွန်ယက်။ အမှန်မှာ Google Home သည်ကွန်ယက်နှစ်ခုလုံးနှင့်သဟဇာတဖြစ်သော်လည်း 5G Wi-Fi သည်ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးစွမ်းအားကောင်းသောဆက်သွယ်မှုကိုခွင့်ပြုသည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းတွင်အချက်အလက်နှင့်အချက်ပြပေးပို့ခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းအတွက်ပိုမိုသောလမ်းကြောင်းများရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
La မိုဘိုင်းဒေတာနှုန်း သင်ဘာလိုအပ်ပါသလဲ။ အိမ်တွင်းရှိအင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အတူသင်ဆန်းစစ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည် ဘယ်မိုဘိုင်းနှုန်းကိုသင်လိုအပ်မလဲ သင့်စမတ်ဖုန်းအတွက် သင်၏အိမ်နှင့်ဝေးကွာနေသည့်အချိန် - မိုဘိုင်းဒေတာပမာဏ၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကုန်ကျစရိတ်စသည်ဖြင့်သင်၏လိုအပ်ချက်အပေါ်ဤအပိုင်းသည်များစွာမူတည်လိမ့်မည်။ တူရိယာတစ်ခု၏အကူအညီဖြင့် အင်တာနက်နှင့်တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မှုနှိုင်းယှဉ်သူ သင့်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီမည်သည့်အရာသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းသင်ရှာဖွေနိုင်လိမ့်မည် မဖြုန်းပါနဲ့.
သင်၏ဂူဂဲလ်မူလစာမျက်နှာအတွက်သင်ငှားရမ်းနိုင်သော convergence package များထဲတွင်လည်းပါဝင်သည် မိုဘိုင်း + အင်တာနက် + ရုပ်မြင်သံကြားနှုန်းထားများ။ လက်ရှိတွင်တယ်လီဖုန်းနှင့်အင်တာနက်အော်ပရေတာကြီးအများစုသည်ရုပ်မြင်သံကြားနှုန်းထားများနှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အွန်လိုင်းရုပ်မြင်သံကြားဝန်ဆောင်မှုများကိုပင်ပေးကြသည်။ Movistar +, Orange TV, Vodafone TV ... HBO, Netflix or Sky တို့ကဲ့သို့သောထပ်ဆောင်းအကြောင်းအရာဝန်ဆောင်မှုများလည်းပါဝင်သည်။
ဤနှုန်းထားများ၏အဓိကမသန်မစွမ်းမှုကိုဂူဂဲလ်ပင်မနှင့်အတူလား ကျွန်ုပ်တို့ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ဤထူးခြားသော ၀ န်ဆောင်မှုအများစုသည်၎င်းနှင့်သဟဇာတမဖြစ်ခြင်း၊ Netflix ပဲ သို့သော်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ထိုကဲ့သို့သောအွန်လိုင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည် HBO Go သည် Google Home နှင့်ယခုအလုပ်လုပ်ရန်ရှိသည်, ထို့ကြောင့် Google သည်အဓိကစပိန်ပံ့ပိုးသူများနှင့်ဆက်သွယ်မှုကိုဖွံ့ဖြိုးရန်အချိန်များစွာမယူပါ။ တကယ်တော့အခု Telefónicaသည် Aura ကို Google Assistant နှင့်ပေါင်းစည်းထားသည် အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများအနက်ကျန်ဖြေရှင်းချက်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်နည်းလမ်းသည်ပိုမိုလွယ်ကူလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
အခြားနည်းလမ်းကို 4G wifi ကွန်ယက်တွင်ရှာပါ
အ 4G wifi နှင့်နှုန်းထားများ ရှိသည်ဖို့ဆန္ဒရှိသောသူတို့အဘို့မစဉ်းစားမစဉ်းစားမရွေး option ကိုတက်ပါစေ သင်၏ Google Home ကိုသုံးရန်ဝိုင်ဖိုင် ကြီးမားသောဝန်ဆောင်မှု packages များကန်ထရိုက်ရန်မလိုဘဲ။ ဤရွေ့ကားရှိသည်ခွင့်ပြုသည် အိတ်ဆောင်ဝိုင်ဖိုင် အချက်ပြ output point အဖြစ်အလုပ်လုပ်သောချောင်းကိုတဆင့်။
4G နှုန်းသည်ပြီးပြည့်စုံသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် ဖိုင်ဘာလွှမ်းခြုံသင့်ဒေသသို့မရောက်လျှင်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဤနှုန်းများသည်ရိုးရာ ADSL နှုန်းထက်ပိုမိုမြန်ဆန်သော download speeds ကိုပေးသည်။ ၎င်းသည်အရည်အသွေးတိုးတက်စေရန်ရှင်းလင်းသောတိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့တွင်အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းမရှိသောကြောင့်လိုအပ်သည့်နေရာတိုင်းတွင် Wi-Fi ကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးသည် SIM ကဒ်နှင့်အလုပ်လုပ်သည်.
4G wifi နှုန်းထားရှိသည့် Google Home ၏ရိုးရာအင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူအနေဖြင့်ခြားနားချက်ကိုသင်သတိမပြုမိပါ။ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော ၀ န်ဆောင်မှုသည်သင်၏ဂူဂဲလ်မူလစာမျက်နှာမဟုတ်ဘဲဟုတ်ကဲ့၊ ၎င်းကိုသင်အမြဲထည့်သွင်းထားသည့်နေရာတွင်ထားရမည်။ အင်တာနက်ကိုသင်နှင့်အတူယူရန်လိုအပ်သည့်အခါ၎င်းကိရိယာကိုအဆက်ဖြတ်ရုံသာလိုအပ်သည်။
ဂူးဂဲလ်ဟာချည်မျှင်နဲ့မချုပ်ဘူး။ ထို့ကြောင့်အဘို့ Google မူလစာမျက်နှာကိုတည်ဆောက်ပါ ၎င်းကိုခံစားရန်သင့်ဖုန်းကိုသက်ဆိုင်ရာ app ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
La Google ပင်မအက်ပ် သင်၏ရုပ်မြင်သံကြားသို့ဗွီဒီယိုများနှင့်အကြောင်းအရာများကိုပေးပို့ရန်သင်၏ Chromecast ကိုသင့်ဖုန်းကိုချိတ်ဆက်ရန်ခွင့်ပြုထားသည့်တူညီသည်။ ၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏အချက်အလက်အထုပ်အတွက်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်စေမည်မဟုတ်သောကြောင့်၎င်းကိုအသုံးပြုရန်အတွက်သင် megabytes များကုန်ဆုံးသွားနိုင်သည့်အန္တရာယ်မရှိပါ။
ဤကိစ္စတွင်သင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည့်အချက်မှာသင်၏မိုဘိုင်းဖုန်း၏သိုလှောင်မှုနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဖြစ်သည်။ သင့် app ကိုပထမဆုံးအကြိမ် configure လုပ်ရန်နှင့်အမှာစာများသို့မဟုတ်အကြောင်းအရာများကိုပေးပို့ရန်အတွက် app သည်လိုအပ်လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက်, သင်အသုံးမပြုသည့်အခါတွင်ပင်၎င်းကိုထုတ်ယူရန်ကြိုးစားပါ သင်အိမ်မှဝေးနေစဉ်နေရာကိုဆက်လက်မသိမ်းယူနိုင်တော့ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » သင်၏ Google Home အတွက်အကောင်းဆုံးနှုန်းထားကိုငှားရမ်းပါ
Android မှာ Gboard ကနေပိုထွက်ရအောင်